Japan si ay u arkaan 6 weydaarsiga cusub crypto
Japan ayaa 6 dhufto ee crypto soo socda ayaa la bilaabay shirkadaha dadweynaha ku qoran Stock Exchange Tokyo.
Shirkadahani waxay shaaca ka qaaday ay tahay markii ugu horeysay in ay ganacsi sameeyaan sida madal sarrifka cryptocurrency a.
sarrifka Bithumb mamnuucay Ganacsi ee 11 dalalka
Mid ka mid ah is-weydaarsiga cryptocurrency ugu weyn ee South Korea ee, Bithumb, ayaa ku dhawaaqday inay ka mamnuucay ganacsiga hanti digital in tiro ka mid ah dalalka, oo ay ku jiraan North Korea, Iran, Ciraaq iyo Sri Lanka, oo ay la socdaan toddoba iyo meelo kale.
Wadamadaas waxaa lagu tilmaamay sida halis sare by dalalka Non-Cooperative iyo Dhulalka (NCCT) initiative.
Post Next:Maxaa cryptocurrency waxaa maal lagula talinayaa in ay iska iibiso, kaas oo ka mid ah si ay u sii?